Esi mee ka ngwa ahịa ngwa ahịa ekwentị eji eji eji ngwa ahịa | Martech Zone
Oge ịmalite tupu oge eruo bụ otu n'ime oge dị oke egwu na ndụ nke ngwa. Ndị nkwusa ga-arụ ọrụ imirikiti ọrụ nke na-etinye njikwa oge ha na usoro nhazi usoro ha maka ule ahụ. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa ngwa ahịa amataghị na nyocha A / B nwere nka nwere ike ịmụrụ ha mma ma nyere aka rụọ ọrụ dị iche iche tupu ebido.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị nkwusa nwere ike isi tinye nyocha A / B tupu ngwa ngwa na ụlọ ahịa: site na ịkwalite ibe ngwaahịa na-agbanwe ike iji kụọ ya nke ọma n'isi ya na itinye ngwa gị. Ndepụta a nke arụmọrụ gbawara n'etiti nwere ike ịkọwapụta usoro ị ga-eji malite tupu ịchekwa oge yana inye arụmọrụ ya.
Nguzo ahia ahia na ule A / B
Ngwa ahịa ngwaahịa ngwaahịa niile (site na aha ruo na nseta ihuenyo) nwere ọrụ ha n'ịmepụta nghọta ndị ọrụ banyere ngwa. Ibe ibe ngwa ngwa a nwere mmetụta dị ukwuu na ntụgharị. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eleghara mkpa ha anya karịsịa mgbe ngwa adịghị na ụlọ ahịa.
Ọbụna ndị nyocha nke na-agaghị agbanwe otu mkpụrụ okwu na-enweghị ezigbo nyocha ga-echefu na ibe ngwa ngwa ahụ bụ ebe mkpebi kachasị. Ihe ngosi, nseta ihuenyo, nkọwa, wdg. Ga-anọchite anya ihe kacha mkpa nke ngwa gị dị ka isiokwu ma ọ bụ karịa ka mma.
Ingtụkwasị obi instin ezughị. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ ụkpụrụ omume ịhapụ itinye ịdị uchu ma dabere na echiche nke ndị otu gị na-eleghara nhọrọ njikwa ngwa ngwa dịnụ. Nnwale A / B na-eme ka ị hapụ egwuregwu ịkọ nkọ n'azụ ma nwee ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ.
Egwuregwu Transformers na-enweta ezigbo aha mkpado site na enyemaka nke Mgbasa ozi Facebook
Gbasaa-ule bụ ihe kachasị mma maka ịmecha ngwaahịa ngwaahịa gị nke na-eme ka njikọta ntụgharị kachasị. Enwere ike iji Facebook iji lelee mkpesa nke onye ọ bụla n'ime mkpọsa mgbasa ozi.
Dịka ọmụmaatụ, Egwuregwu Space Ape jiri Mgbasa ozi Facebook iji họrọ akara aha maka egwuregwu egwuregwu na-abịanụ. Ha mepụtara peeji ọdịda atọ na-ekwupụta aha ngwa ngwa dị iche iche wee bido mgbasa ozi mgbasa ozi 3 Facebook na ebumnuche yiri. N'ihi ya, ndị na-agbanwe 'Transformers: Earth Wars' meriri ma jiri ya maka ngwa ahịa niile maka ngwa.
Agbanyeghị, mgbasa ozi Facebook anaghị enye ọnọdụ. Yabụ, mgbe ọ bịara n'ụzọ dị mgbagwoju anya ma raara onwe ya nye, ọ ka mma iji nyiwe maka i emomi ụlọ ahịa ngwa dịka Gbasaa.
Gbasaa-Ule na-egosi na Industrylọ ọrụ mmepụta ihe anaghị arụ ọrụ maka nnụnnụ ndị iwe
Nsonaazụ A / B nwere ike iju anya n'ezie. Rovio mụtara ihe a tupu ya amalite 'Angry Birds 2 ′. Ọ bịara pụta na eserese eserese na-arụ ọrụ ka mma karịa ndị nwe ala nke na-emegide usoro ịgba egwu niile. Ihe nlere anya gosipụtara na ndị ahịa 'Angry Birds' enweghị ike iru eru dị ka ndị egwuregwu siri ike ka etu ụlọ ọrụ ghara isi tinye ya n'ọrụ.
Ya mere, ịmalite ịmalite nkewa na-egbochi njehie dị njọ nke iji nseta ihuenyo na usoro na-ezighi ezi. N'elu 'Angry Birds 2 ′ tọhapụ, ngwa ahụ nwetara 2,5 nde nke mgbakwunye ọzọ na naanị otu izu.
Yabụ, njikarịcha ọgụgụ isi nke ngwaahịa ngwaahịa niile na-eme ka mgbanwe kachasị mma na ma ụzọ ụgbọ ala na nke akwụ ụgwọ n'oge izu izizi nke ngwa ngwa na ụlọ ahịa.
G5 jiri A / B Ule iji mata ezigbo ndị na-ege ntị na ọwa mgbasa ozi kacha mma
Inwe ọhụụ doro anya nke ndị na-ege gị ntị kachasị mma bụ isi ihe na-aga nke ọma na ngwa ọ bụla. Ngwa ngwa ị matara ndị ndị ahịa gị bụ, ọ ka mma. Nlele A / B na - enyere aka n’idozi nsogbu a ọbụlagodi mgbe ngwà gị adịghị n’ụlọ ahịa.
Nwere ike ịchọpụta onye nwere ike ịwụnye ngwa gị na-agba ọsọ nyocha na otu igwe mmadụ dị iche iche. Ihe data ndị a dị oke mkpa maka mmemme ahịa ọ bụla ọzọ ozugbo ngwa gị dị ndụ. Iji maa atụ, G5 Entertainment gbara ọtụtụ nyocha maka ngwa 'Obodo ezoro ezo' ha wee chọpụta na ebumnuche ha na-atụgharị anya bụ nwanyị 35 + nke hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya ma nwee mmasị na egwuregwu, ilu, na ihe omimi.
Nwekwara ike ịnakọta ndị ọrụ nwere kọntaktị n'ime ụdị nnabata A / B na-ewu tupu oge eruo maka akwụkwọ ozi ụlọ ọrụ na mmelite ngwa.
Nnwale A / B dị oke mkpa maka iru eru ọwa mgbasa ozi. Nchọpụta nke isi mgbasa ozi nke na-eweta ọtụtụ ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na-eme ka atụmatụ egwuregwu ọ bụla na-ere ahịa. Companieslọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na-enyocha arụmọrụ nke ọwa mgbasa ozi dị iche iche site na nyocha-nkewa. Na iji atụnyere arụmọrụ ha, ha họọrọ otu n'ime ụdị dị iche iche maka ịkwalite egwuregwu na ngwa ọhụrụ ha.
Prisma Kọwaa ọnọdụ zuru oke site na iji nyocha A / B
Ndị nkwusa na-ezutekarị nsogbu nke iburu atụmatụ nke ngwa nke kacha emetụta ọtụtụ ndị na-ege ha ntị. Ọ dịghị mkpa ka ị gụọ akwụkwọ tii, na-agba ọtụtụ usoro A / B. Iji maa atụ, Prisma bịara gbawaa iji nwalee ndị ọrụ ọkacha mmasị n'etiti ndị ngwa ahụ na-enye:
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịnwe ngwa a na-akwụ ụgwọ, nyocha A / B nwere ike inyere gị aka hụ na mkpebi a ziri ezi. Ọ dị oke mkpa iji chọpụta ọnụahịa nke na-agaghị atụ ndị ahịa nwere ụjọ ụjọ. Nnwale A / B nwedịrị ike igosi na ị ga-enyocha iwu ọnụahịa nke ngwa maka naanị ụdị nnwere onwe na ịzụta ihe n'ime ngwa.
FiftyThree rụzuru na Localization Ekele Split-Ule
Nga-igba egbe adọ ma ọ bụ oge tupu isi ngwa redesign bụ n'ezie mma maka localizing gị na ngwa. Agbanyeghị, ezughị ịsụgharị nkọwa, na ị kwesịrị ịkọwapụta karịa ederede ahụ. Ọ dị mkpa ịghọta na ị na-agbanwe ngwaahịa gị maka ọdịbendị ọzọ, ọ bụghị naanị asụsụ ọzọ. Nyocha A / B dị mma iji nwalee nkwupụta ọdịbendị dị iche iche.
Iji maa atụ, FiftyThree jiri nyochawa nkewa iji chọta ngwa Akwụkwọ ha maka ahịa ndị na-asụ Chinese. Ihuenyo ọhụrụ a na-asụ na Chinese nke nwere ọtụtụ ọdịdị nwere mgbanwe dị mma karịa 33% karịa ndị Bekee.
Enweghị mkpa inye onwe gị oge siri ike na-agbalị ịkọ nkọ ihe ga-arụ ọrụ nke ọma maka ngwa gị tupu ya amalite. Iji ule A / B, ị nwere ike inye ike ntụgharị gị ọbụlagodi mgbe ngwa anaghị adị ndụ. Yabụ, ị ga - ahụ na nsonaazụ stellar ozugbo ịmalitere ndụ nke ngwa gị n'ime ụlọ ahịa.
Split-ule na-abụghị nanị na-ewe akakabarede ọnụego ka ohuru larịị; ọ na-emekwa ka usoro mkpebi mee ka ọ pụta ìhè ma wepụ esemokwu otu na-enweghị isi. Na mgbakwunye, iji nyiwe dị ka Gbasaa, ndị ahịa na-enwetakwa nghọta bara uru banyere omume ndị ọrụ nke enwere ike iji maka mmepe n'ihu nke ngwa yana ụlọ ahịa na-egbuchasị peeji.
Tags: ule ngwaMwepụtangwa mkpanaka ab nwaapeeji nke ngwa ngwa ngwa ngwamobile ngwa gbawara n'etiti-anwalepeeji nke ngwa ngwa mkpanakannwale ngwa mkpanakamobile ngwamobile ngwa ọdịnalatupu-maliteịmalite uleule ngwaahịatesting
Liza Knotko bụ Managerontent Marketing Manager na Gbasaa, ngwa nyocha A / B nke ngwa Rovio, MSQRD, Prisma na Zeptolab tụkwasịrị obi. SplitMetrics na-enyere ndị mmepe ngwa mkpanaka mbanye anataghị ikike ngwa ahịa site na iji nyocha A / B na-arụ ọrụ na nyochaa nsonaazụ.
InsideView Fuels Na-aga nke Ọma ahịa na Ebumnuche Ezubere Iche
Ka ọ na-erule Ọktọba 2017, Ikwesiri Inwe Asambodo SSL
Aug 7, 2017 na 4: 44 AM
Chei, hụ ndị ahịa ngwa ngwa a n'anya. Daalụ maka ịkekọrịta!